LALIGA NEWS Archives — Sports Myanmar
July 21, 2019 - by Edi Tor
ယနေ့ နံနက်ပိုင်းမှာ ကစား သွားခဲ့တဲ့ ICC ဖိတ်ခေါ်ဖလား ပြိုင်ပွဲမှာ ဘိုင်ယန် မြူးနစ်အသင်းက ရီးရဲလ် အသင်းကို ၃-၁ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ နွေရာသီ ဈေးကွက် အတွင်း မှာ အပြောင်းအလဲ တွေ ပြုလုပ်ထားခဲ့ တဲ့ ရီးရဲလ် အသင်းအတွက်တော့ ရာသီ ကြိုပထမဆုံး ပွဲစဉ်မှာပဲ အရှက်တကွဲ ရှုံး နိမ့်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ …
ယနေ့ မနက်က ဘိုင်ယန်မြူးနစ် အသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ICC ပွဲပြီးနောက် ဇနက်ဒင်း ဇိဒန်း က ရီးရဲယ်မက်ဒရစ် အသင်းဟာ ဝေးလ်လက်ရွေးစင် တောင်ပံကစားသမား ဂါရက်ဘေးကို ရောင်းချဖို့ အတွက် ကြိုးစားနေပြီး ၎င်းထွက်ခွာမှုကို မကြာခင် မြင်တွေ့ ရနိုင်တယ်လို့ အတည်ပြု ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။ ကြော်ငြာ (ဒေါ်လာ ၁၀၀ အကောင့်ဖွင့်ရင်–Bonus ဒေါ်လာ …
July 20, 2019 - by Edi Tor
ရာသီသစ်စတင် ဖို့ တလတောင် မလိုတော့တဲ့ အချိန်မှာ ဥရောပရဲ့ အသင်းတိုင်းက အပြောင်း အရွှေ့ဈေးကွက် အတွင်း မှာ ကိုယ့်အထွာနဲ့ ကိုယ် ပါဝင် လှုပ်ရှားနေကြပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ ဈေး ကွက် ကို ဦးဆောင်နေတာကတော့ စပိန် ထိပ်သီး ၃သင်းဖြစ်တဲ့ ရီးရဲလ် ၊ ဘာစီလိုနာ နဲ့ …
မက်ဆီအကြောင်း အထူး ချီးကျူးစကား ပြောကြားရင်း အသင်း ပြောင်းရွှေ့ လိုကြောင်း နောက်တစ်ကြိမ် ပြသသွားတဲ့ #နေမာ
PSG အသင်း ရဲ့ အားထား ရတဲ့ တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစား သမား ဖြစ်သူ နေမာ ဟာ ဒီနွေ အတွင်း ပြင်သစ် မြေမှ ထွက်ခွာ လိုနေ ပြီး သူ့ရဲ့ လားရာ ကတော့ အသင်း ဟောင်း ဘာစီလိုနာ အသင်း ပဲ ဖြစ်နေ ခဲ့ ပါတယ် …
ရီးရဲလ်အသင်းနဲ့သတင်းတွေထွက်နေချိန်မှာ ရီးရဲလ်အသင်းသား၂ဦးကိုချီးကျူးလိုက်တဲ့ #နေမာ
July 19, 2019 - by Edi Tor
ဘာစီလိုနာ အသင်းမှာမက်ဆီ၊ ဆွာရက်ဇ် တို့နဲ့ အတူ MSN တိုက်စစ်အတွဲအဖြစ် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ နေမာ ဟာ၂၀၁၇ နွေရာသီမှာ PSG အသင်းကို ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ကြေးနဲ့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဘလွန်းဒီအောဆု ရရှိရေးမှာ မက်ဆီရဲ့ လောင်းရိပ်ကနေ ရုန်းထွက်ချင်ခဲ့တာကြောင့် အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမယ့် ဒဏ်ရာတွေကြောင့် ထင်သလောက် ဖြစ်မလာသေးတာဖြစ်ပါတယ်။အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ဒီဘရာဇီးလ် သားဟာ စပိန် မြေကိုပြန်လာချင်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်နေပြီး …
ဖာလန်းမန်ဒီ ဟာ ရီးရဲမက်ဒရစ် ရဲ့ ကားလိုစ့် လက်သစ် ၊ မာဆယ်လို လက်သစ် ဖြစ်လာမယ် လို့ မှတ်ချက်ပြုလိုက်တဲ့ ကစားသမားဟောင်း
ရီးရဲမက်ဒရစ် အသင်း ရဲ့ ကွင်းလယ် ကစား သမား ဟောင်း ခရစ် စတီယန် ကာရန်ဘူ ကတော့ အသင်း ကို အသစ် ရောက်ရှိ လာမယ့် နောက် ခံလူ ဟောင်း ဖာလန်း မန်ဒီ ဟာ တစ်ချိန် တုန်းက မက်ဒရစ် ရဲ့ အကျော် အမော် နောက်ခံလူ ရော်ဘတ်တို …
နေမာအတွက် ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ မက်လောက်ဖွယ်ရာ ကမ်းလှမ်းမှုကို ပယ်ချလိုက်တဲ့ #PSG
July 17, 2019 - by Y K
အခု တစ်ပါတ် အတွင်း မှာတော့ စပိန် ထိပ်သီး ဘာစီလိုနာ အသင်း ဟာ ကစားသမား ဟောင်း ဖြစ်တဲ့ နေမာ ကို ကတ်တလန် မြေဆီ ပြန်လည် ခေါ်ယူ လို နေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်း တွေ အကျယ်တဝင့် ထွက်ပေါ် နေခဲ့ ပါတယ် ။ ကြော်ငြာ (ဒေါ်လာ …
ဘာစီလိုနာ ရဲ့ ဂန္ထ၀င် နံပါတ် ၁၄ ကို ငြင်းဆိုပြီး ပိုင်ရှင်ရှိနေတဲ့ ကျောနံပါတ် ၂၁ ကို ဘာကြောင့် ဒီယွန် တောင်းဆိုခဲ့တာလဲ ?
July 15, 2019 - by Edi Tor
ဘာစီလိုနာ အသင်း ရဲ့ ကစား သမား သစ်လေး ဖရန်ကီ ဒီယွန် ကတော့ လာမယ့် ရာသီ မှာ အသင်းသစ် နဲ့ အတူ စွန့်စား ခန်းသစ် တွေ ဖွင့်လှစ် ဖို့ စိတ်လှုပ် ရှား နေလောက် ပါပြီ ။ နယ်သာလန် ၊ အိုင်ယက်စ် အသင်း တွေ …
နောက်ဆုံး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေ အရ ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ အကြွေးစာရင်းဟာ ယူရို သန်း 800 ကျော်အထိ မြင့်တက်လာလျှက် ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကြော်ငြာ (ဒေါ်လာ ၁၀၀ အကောင့်ဖွင့်ရင်–Bonus ဒေါ်လာ ၁၀၀ ထပ်ရမည်!!! ပုံကို နိုပ်ပြီး အကာင့်ဖွင့်လိုက်ပါ ) ဒါကြောင့်လဲ သူတို့ဟာ ဂရစ်ဇ်မန်း ရဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး …
ရာသီသစ် အတွက် ဘာစီလိုနာ ရဲ့ တိုက်စစ် အခင်းအကျင်းက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ
အန်တွိုင် ဂရစ်ဇ်မန်း ကတော့ ဘာစီလိုနာ ကို တကယ် ရောက်လာခဲ့ ပါပြီ ။ ရှည်ကြာ လှတဲ့ စောင့်ဆိုင်းမှု အပြီး မှာတော့ ပြင်သစ်သား ဟာ သူ သွားချင် နေတဲ့ နေရာကို ရောက်ရှိ လာခဲ့ပါပြီ ။ ၂၀၁၈ ကတည်း က နူးကမ့် ကို ရောက်ရ မှာ …